Nzvimbo dzakachengeteka dzekutarisana nedambudziko mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Chakaipisisa chinogona kuitika hachisi chekuti Spanish stock index iri padhuze ne 9.000 poindi nhanho. Asi iwe unogona kuenda kumberi pasi yako mamiriro kutyora bass player. Iine mukana wekuti vashoma uye vepakati varimari vanogona kurasikirwa maeuro mazhinji mukushanda kwavo muequities kubva zvino zvichienda mberi. Iyi ingangoita imwe yezviitiko zvinounzwa nemusika wekutengesa wenguva yekupedzisira yegore. Iko kutengesa kuri kuiswa nekristaro yakajeka pakutenga.
Maaramu akajekesa muchikamu chakanaka chevashambadziri uye kutya kuve munzvimbo dzakashama mumusika wemasheya weSpain anopfuura kunguva chete. Kwete pasina, iyo kondirakiti vhoriyamu yakadonha zvakanyanya mukati memwedzi iyi yezhizha. Kune dzimwe mari zhinji dzakatobvisa mari yavo kubva kuSpanish equities. Ehe, hapana kuvhunduka mumapaki, asi kune tariro iyo isina kumborarama kwenguva yakareba. Kusvika padanho rekuti mashandiro aderera zvakanyanya munguva ino.
Kunyangwe iwo mabhangi ari iwo ari kupomera zvakanyanya zveichi chiitiko chinoshungurudza, zvinokanganisawo zvimwe zvikamu zvemusika wemasheya zvakakosha zvakanyanya. Ndiyo nguva chaiyo yekutsvaga kuchengetedzeka uye zviwanikwa zvemari zvinoshanda senzvimbo yekuvanda kubva panguva dzekusagadzikana izvo zviripo zviri kupihwa. Panguva apo fixed income haasi kuenda panguva dzakanakisa. Kwete zvishoma. Kana zvisiri, nekusiyana, zvinopa hushoma kwazvo purofiti iyo isingatombo pfuura 1,50% mazinga.
1 Assets ine mugove wedividhiyo
2 Yakagadziriswa uye yakavimbiswa kufarira
3 Tarisa zvisungo zvinopa chengetedzo
4 Wedzera chikwereti pane kuchengetedza
5 Matunhu mazhinji anodzivirira
6 Bheji pane kuderera mumusika wemasheya
Assets ine mugove wedividhiyo
Imwe yedzimwe nzira idzo misika yemasheya inotipa panguva ino chaiyo ndeyezvivigiro zvinogovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Iyo inzira inoshanda kwazvo yekudzikisira iri gali riri kugadzirwa mumusika wemasheya. Izvo hazvigone kukanganwika kuti kubudikidza neiyi yekudyara modhi kubatsirwa kwe kusvika ku7%. Iperesenti isina kupihwa nechero chigadzirwa chemari, zvirinani kuchisimbisa kubva pakutanga. Mupfungwa iyi, zvakakodzera kuti urangarire kuti nguva inochengetwa, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi anobhadhara zvakanyanya haapi 1%.
Kune akawanda masheya anounza iyi yakasarudzika hunhu uye iwe unogona kusarudza kubva kumazhinji matengesi emusika wemasheya. Kunyangwe mune chero zvazvingaitika, iri yemhando yekudyara iyo yakanangwa kunyanya panguva yepakati nepakati. Kana iwe uchida kuchengeta mari kwenguva yakareba kudaro, hongu ndeimwe nzira yaunofanirwa kuita ita kuti pfuma yako ibatsire vashandi vanobudirira. Kunze kwezvinogovaniswa mumasheya mune misika yezvemari nekuti izvo zvinonyanya kukosha ndezvekuti iwe uchave uine yakagadziriswa uye yakavimbiswa kufarira gore rega.
Yakagadziriswa uye yakavimbiswa kufarira
Mhedzisiro inzira inozivikanwa kwazvo kune mumwe anozvidzivirira kana anochengetedza investor chimiro uyo, pamusoro pezvose, anoda kuchengetedza capital yavo. Uye zvakare, inowanzoenderana nemakambani e cap yepamusoro izvo zvakagadzikana uye zvishoma zvakapihwa kufungidzira. Kubva pane ino chikamu hapana chaunotya, asi unogona kuve nemari yekuwedzera mune zvese zviitwa, pasina kusimbiswa nemisika yezvemari. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kugadzira yakagadzika yekuchengetedza bhegi zvishoma nezvishoma uye pasina zvakawandisa njodzi mukuhaya.
Izvozvi, hapana chigadzirwa chinosimbisa iyi purofiti, kana mune yakagadziriswa kana yakagadzikana mari. Naizvozvo, iwe une zvakawanda zvekuwana kupfuura kurasikirwa kuburikidza neiyi yakasarudzika nzira yekudyara. Iwe haugone kukanganwa kuti imari yaunogona kutarisira gore rega rega, nekuti inovimbiswa kubva pakutanga. Nemipendero yekumiririra inoenda kubva pa3% kusvika pa7% uye nekudaro iwe une yakawanda tsika yekusarudza kubva pakugovaniswa kwezvikamu. Zvese izvi pasina kusiya nzvimbo dzako mumakiti. Kunyangwe paine mamiriro ekusagadzikana kukuru kuri kuitwa nemisika yemasheya, kunyanya iyo yeSpanish.
Tarisa zvisungo zvinopa chengetedzo
Imwe sarudzo mune yazvino mamiriro ezvinhu epasirese anomiririrwa nenhumbi dzinopa chivimbo chakanyanya. Uye neiyi pfungwa, zvisungo zvinogona kuve sarudzo chaiyo, sekureba zvichibva munyika inogadzira chengetedzo. Semuenzaniso, mu United States pari zvino. Ichokwadi kuti kufarira kunopihwa nekudyara uku hakuna kunyanya kukwirira, asi zvirinani kuti hauzorasikirwi nemari mukuita izvo zviri shure kwezvose zvazviri. Nzira yakanakisa yekutora chinzvimbo mune ichi chemari chigadzirwa ndeye kuburikidza nemari yekudyara.
Zvirinani muhomwe yekudyara nekuti inobvumidza kusiyanisa mari pamwe chete nezvimwe zvinhu zvemari, zvese kubva kune yakatarwa uye inosiyana mari. Kusvika padanho rekuti iwe unobvisa njodzi muzvinzvimbo zvakatorwa nemari. Kunyangwe kubva kune inoshanda manejimendi iyo inogona kuchinjika kune ese mamiriro ezve misika yezvemari, kunyangwe zvakashata zvakanyanya sezvinga fungidzirwe panguva ino. Kune rimwe divi, iwe une mukana wakakura waunogona kusarudza pakati pemamodeli mazhinji uye nemhando dzakasiyana. Nemakomisheni ayo mune zvimwe zviitiko anogona kuve anodhura pane kutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa.
Wedzera chikwereti pane kuchengetedza
Kana iwe uri muzvidziviri anonyanya kuzvidzivirira iwe uchagara uine zviwanikwa zvemabhengi zvigadzirwa zveupenyu hwese uye kuti kubva zvino zvichienda mberi kunovandudza purofiti yako. Semhedzisiro yezvinoonekwa simuka pamitengo yekufarira mudunhu reyuro uye izvo zvichagadzira kuti ivo vane zvishoma zvinobatsira kupfuura kusvikira zvino. Mupfungwa iyi, sarudzo yakanaka inogona kunge iri mukusaina dhipoziti yebhangi ine yakati rebei kwenguva refu yekusimudzira iyo inokwidza chido icho chichaudza kune vanyori vacho. Zvirinani kwenguva yeiyo chikamu uye kusagadzikana mumisika yemasheya uye inogumira njodzi mukushanda kwemari.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti izvi zvigadzirwa zvekuchengetedza zvakagadzirirwa chero saver, Pasina kurambidzwa. Iwo haasi mamodheru akaomarara uye iwe unogona kuvashandira iwo nemari ine mwero. Ichi ndicho chimwe chezvakanakira pamusoro pemamwe mafomati ekudyara. Izvo zvinokubatsira iwe kuyera kukodzera kwekuhaya kwako kwenguva yezvino yekubatana nguva iyo varimari vari kupfuura nayo. Chero zvazvingaitika, ndeimwe yedzimwe nzira dzaunogona kuongorora panguva ino nekupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Matunhu mazhinji anodzivirira
Chero zvazvingaitika, kune akawanda masheya muzvikwereti zvinogona kuita zvirinani kupfuura avhareji yemahombe indices masheya. Dzimwe dzadzo ndidzo dze kudzivirira uye zvekushandisa muchiuto Vari kuona kuti zviito zvavo zviri kukosheswa sei nekumwe kusimba mazuva ano. Dambudziko riri muchokwadi chekuti paine mashoma kwazvo zvirevo mumabhanga emunyika. Kusvika padanho rekuti hauzove nesarudzo kunze kwekuenda kumimwe misika yezvemari, senge United States, iyo ine makomisheni akakwira ayo pasina mubvunzo achaita kuti mashandiro ako adhure.
Imwe sarudzo pamusika wekutengesa ndeyekuenda kumahunhu akasunganidzwa nekutanga kushandiswa. Imwe yenyaya idzi inomiririrwa ne makambani ezvekudya. Munguva dzakaoma vane kuita kuri nani pamusika wemasheya kupfuura vamwe vese. Nekushomeka kushoma mumitengo yayo uye izvo zvinokutendera iwe kuti ugadzire yakagadzikana mari yekudyara portfolio kwemakore mashoma anotevera. Nemisiyano mishoma pakati pemitengo yavo yepamusoro uye yepasi, kuti iwe ugone kuwana diki dzore pazvinzvimbo zvavo.
Bheji pane kuderera mumusika wemasheya
Sekupedzisira sarudzo, iwe unogara uchifanira kubheja pamari inowira inoshanduka, kunyangwe mashandiro aya aine njodzi dzakawandisa dzaungatadza kufunga nadzo panguva yakaoma seyazvino. Nekuti ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda muzvinzvimbo zvavo, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete zvakare kukusiira ma euro mazhinji zviya. Iwe unongofanirwa kushandisa iri rakasarudzika zano kana iwe uchifunga kuti iwo musika wekutengesa une rakakura kudzika rwendo mumwedzi iri kuuya kana kunyangwe makore.
Iyi sisitimu yekudyara inogoneswa zvese mukutenga nekutengesa masheya uye mune zvimwe zvigadzirwa zvemari. Semuenzaniso, Investment funds kana mvumo uye zano ravo riripo mumasheya, zvikamu uye indices. Kunyangwe zvakadaro zvirokwazvo unofanirwa kupa kumwe kudzidza mukushandisa kweizvi zvigadzirwa zvemari. Hazvishamisi kuti mutsauko mudiki unogona kureva maeuro mazhinji mukuita kwakaitwa.
Iwo margins ari akatetepa kwazvo uye iwe unofanirwa kuziva mashandiro nemaizi emari sevamwe vashoma. Kune rimwe divi, unogona kunge usiri mumamiriro akakwana ekuvatengesa nezvikonzero zvakasiyana. Kunyangwe mukupedzisira sarudzo ichazongotenderera pauri, zvichienderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor uye kuti mune imwe neimwe nyaya ichave yakanyatsosiyana, sezvaunogona kunzwisisa panguva ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzvimbo dzakachengeteka dzekutarisana nemusika wemasheya munguva yedambudziko
Zvikwereti zvekudyara: zvinopfuura mari